के अधिकार छ राष्ट्रपतिसँग ? | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
के अधिकार छ राष्ट्रपतिसँग ?
सात वर्षजति नेहरू र राजेन्द्र प्रसादबीच टक्कर चलिरह्यो। अरू त अरू राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंहजस्ता व्यक्तिले दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत भएको प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको भारतीय पोस्ट अफिस (संशोधन) विधेयकमा सही छाप लगाउन मानेनन्। अर्को घटना पनि छ, उनले निर्वाचन आयोग प्रमुखलाई बोलाएर सोधे- हरियाणा प्रान्तको चुनाव गर्न किन ढिलाइ गरिँदैछ ?
- कमल कोइराला , अन्नपूर्ण पोस्टबाट
12/21/2017 05:17:00 PM